Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny bioenergy na ny angovo biomass | Green Renewable
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha no noresahiko angovo geothermal ary naneho hevitra aho fa ny angovo azo havaozina izay misy eto amin'ity izao tontolo izao ity, misy ny sasany fantatra sy ampiasaina, toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny rivotra, ary ny hafa tsy dia fantatra (indraindray tsy dia fantatra loatra) toy ny angovo geothermal sy ny an'ny biomassa.
Ny angovo biomassa na antsoina koa bioenergy tsy dia fantatra loatra sy ampiasaina io noho ny karazana angovo azo havaozina hafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatsika izay rehetra mifandraika amin'ity karazana angovo azo havaozina ity sy ny fampiasana azy mety.
1 Inona no atao hoe angovo biolojika na bioenergy?
2 Loharano samihafa ahazoana bioenergy
3 Ahoana ny famokarana angovo biomassa?
4 Vokatra lehibe nalaina avy amin'ny biomassa
5 Inona no ampiasaina amin'ny biomassa ary inona no fanjifana azy ao amin'ny faritaninay?
6 Vovoka biomassa sy ny fiasan'izy ireo
7 Karazan-vilany biomassa
8 Tombontsoa amin'ny fampiasana angovo biomassa
9 Tombony amin'ny fampiasana angovo biomassa
Inona no atao hoe angovo biolojika na bioenergy?
Ny angovo biomassa dia karazana angovo azo havaozina azo amin'ny alàlan'ny ny fandoroana ireo fitambarana organika azo avy amin'ny fizotran'ny natiora. Izy ireo dia tavela amin'ny organika toy ny sisa tavela, vato oliva, akorandriaka, sisa tavela amin'ny hazo sns. Avy amin'ny natiora izany. Azonao atao ny milaza fa ny fako voajanahary.
Ireny taolam-paty ireny dia doran'ny fandorana mivantana na azo ovaina ho lasa solika hafa toy ny alikaola, methanol na solika, ary amin'izany dia mahazo angovo isika. Amin'ny fako biolojika dia afaka mahazo biogas koa isika.
Loharano samihafa ahazoana bioenergy
Ny toetra mampiavaka ny bioenergy dia karazany iray izy angovo azo havaozina ary, noho izany, maharitra ho an'ny fiaraha-monina sy ny fihinanana angovo. Araka ny efa noresahiko teo aloha, ity angovo ity dia azo avy amin'ny fandoroana karazana fako isan-karazany, na ala izany na amin'ny fambolena, raha tsy izany tsy azo ampiasaina mihitsy. Na izany aza, ho hitantsika ireo karazana loharanom-pahalalana biomassa ampiasaina amin'ny famoronana bioenergy sy izay ampiasainy:
Ny bioenergy dia azo alaina amin'ny alàlan'ny voly angovo izay natao manokana ho azy. Ireo dia karazan-javamaniry sasany izay tsy dia misy sakafo ara-tsakafo na mandritry ny ain'olombelona, ​​fa mpamokatra biomassa tsara. Izany no antony ampiasantsika ity karazana zavamaniry ity amin'ny famokarana bioenergy.
Ny bioenergy dia azo alaina amin'ny fomba hafa hetsika fitrandrahana ala, raha ny residu an'ala dia tsy azo ampiasaina na amidy amin'ny asa hafa. Ny fanadiovana ireo sisa tavela amin'ny ala ireo dia manana tombony fa, ankoatry ny fandraisana anjara amin'ny fanadiovana ireo faritra sy ny famokarana angovo maharitra, dia misoroka ny mety ho fahamaizana noho ny fandoroana ireo taolam-paty.
Loharano fako iray hafa amin'ny famokarana bioenergy ny fampiasana lfako amin'ny indostria. Ireo dia azo avy amin'ny fandrafetana na ozinina mampiasa hazo ho akora fototra. Izy io koa dia mety ho avy amin'ny fako fanary toy ny lavaka oliva na akorandriaka.
Ahoana ny famokarana angovo biomassa?
Ny angovo azo amin'ny alàlan'ny taolam-paty dia vokarin'ny fandoroana azy ireo. Ity fandoroana ity dia mitranga ao vilany izay mirehitra tsikelikely ny fitaovana. Io fomba fanao io dia miteraka lavenona azo ampiasaina aorian'izay ary ampiasaina ho zezika. Azo apetraka koa ny mpiorina afaka mitahiry ny hafanana be loatra vokarina ary afaka mampiasa an'io angovo avy eo.
Vokatra lehibe nalaina avy amin'ny biomassa
Miaraka amin'ny fako biolojika, ny solika toy ny:
Biofuel: Ireo dia azo avy amin'ny taolan'ny biby sy zavamaniry. Ny toetran'ireo taolam-paty ireo dia azo havaozina, izany hoe, novokarina tsy an-kijanona teo amin'ny tontolo iainana ary tsy simba. Ny fampiasana biofuel dia ahafahana manolo ny solika fôsily azo avy amin'ny solika. Mba hahazoana biofuel, karazana ampiasaina amin'ny fambolena, toy ny katsaka sy mangahazo, na zavamaniry oleaginous toy ny soja, voninkazo na palma dia azo ampiasaina. Ny karazana ala toy ny kininina sy ny kesika dia azo ampiasaina ihany koa. Ny tombony ara-tontolo iainana amin'ny fampiasana biofuel dia ny famoahana tsingerin'ny karbaona mihidy. Izany hoe, ny karbaona avoaka mandritra ny fandoroana ny biofuel dia efa natelin'ny zavamaniry teo aloha nandritra ny fitomboany sy ny famokarany. Na dia eo am-piadian-kevitra aza izany amin'izao fotoana izao satria tsy mahay mandanjalanja ny fifandanjana entona sy avoakan'i CO2.
Biodiesel: Ity dia biofuel ranoka soloina hafa izay novokarina avy amin'ny loharanon-karena azo havaozina sy an-trano toy ny menaka legioma na tavy biby. Tsy misy solika ao anatiny, azo ovaina izy io ary tsy misy poizina satria tsy misy solifara sy kôsinogenika.
Bioethanol: Ity solika ity dia novokarina vokatry ny fanamasinana sy ny fanadiovana ny starch ao anaty biomassa, izay nalaina tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny enzyme. Azo alaina amin'ireto akora manaraka ireto: kankana sy serealy (varimbazaha, katsaka, ravina, mangahazo, ovy, vary) ary ny siramamy (molatra cane, molase bitika, syrup siramamy, fructose, whey).
Biogas: Ity entona ity dia vokatry ny famotehana anaerobika ny zavatra biolojika. Ao amin'ny fanariam-pako efa milevina, ny biogas dia alaina amin'ny alàlan'ny fantsom-pipa ho an'ny fampiasana angovo avy eo.
Inona no ampiasaina amin'ny biomassa ary inona no fanjifana azy ao amin'ny faritaninay?
Amin'ny ankapobeny ary mihoatra na latsaka mitovy amin'ny angovo geothermal, biomassa ampiasaina hiteraka hafanana. Amin'ny ambaratonga indostrialy dia afaka mahita ny fampiasana hafanana voalaza isika ho an'ny famokarana angovo herinaratra, na dia sarotra sy lafo aza izany. Mba hanararaotana ny hafanana ateraky ny fandoroana ny fako biolojika dia apetraka ao an-trano ireo vata famelomana biomass mba hananana hafanana ary koa hanafanana rano.
Ao amin'ny faritaninay, Espana dia ao ny toerana fahefatra any amin'ireo firenena mandany biomassa betsaka indrindra. Espaniôla no mpitarika eropeana amin'ny famokarana bioethanol. Mampiseho ny statistika fa mahatratra ny biomassa any Espana efa ho 45% amin'ny famokarana angovo azo havaozina. Andalusia, Galicia ary Castilla y León no vondrom-piarahamonina mahaleo tena manana fanjifana betsaka indrindra noho ny fisian'ireo orinasa mandany biomassa. Ny fivoaran'ny fanjifana biomassa dia miteraka safidy teknolojia vaovao ary mihombo hatrany amin'ny fampiasana azy amin'ny famokarana angovo herinaratra.
Vovoka biomassa sy ny fiasan'izy ireo
Ny boiler biomassa dia ampiasaina ho loharanon'angovo biomassa ary ho an'ny famokarana hafanana amin'ny trano sy tranobe. Mampiasa solika voajanahary toy ny pellet hazo, lavaka oliva, sisa tavela amin'ny ala, akorandriaka sns. Izy ireo koa dia ampiasaina hanafanana rano amin'ny trano sy tranobe.
Ny fandidiana dia mitovy amin'ny boiler hafa. Ireo boiler ireo dia mandoro ny solika ary miteraka lelafo marindrano izay miditra ao anaty fariben'ny rano ao anaty exchanger hafanana, amin'izay dia mahazo rano mafana ho an'ny rafitra. Mba hanatsarana ny fampiasana boiler sy loharanon-karena biolojika toy ny solika, dia azo apetraka ny mpiorina izay mitahiry ny hafanana vokarina amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba fanaovana takelaka amin'ny masoandro.
Vovoka biomassa ho an'ny tranobe. Loharano: http://www.solarsostenible.org/tag/calderas-biomasa/
Mba hitahirizana ireo fako biolojika izay hampiasaina ho lasantsy dia mila izany ny vilany kaontenera fitehirizana. Avy amin'io kaontenera io, amin'ny alàlan'ny tsiranoka tsy misy farany na mpanome sakafo suction, dia mitondra azy any amin'ny vata fandrahoana, izay misy ny fandoroana. Io fandoroana io dia miteraka lavenona izay tsy maintsy rarahana im-betsaka isan-taona ary mivangongo ao anaty ashtray.
Rehefa misafidy karazana boza biomassa hovidiana sy hampiasaintsika isika dia tsy maintsy mamakafaka ny rafitra fitehirizana sy ny rafitra fitaterana sy fikirakirana. Misy vovo avelao handrehitra karazana solika mihoatra ny iray, raha ny hafa kosa (toy ny vilany pellet) dia avela handrehitra karazana solika iray fotsiny.
Ny vila dia mamela ny filan'ny solika mihoatra ny iray fitomboan'ny fahafaha-mitahiry satria manana habe sy hery lehibe kokoa izy ireo. Ireo dia natao ho an'ny fampiasana indostrialy.
Amin'ny lafiny iray dia hitantsika izytoy ny vilany pellet izay mahazatra indrindra amin'ny hery salantsalany ary ampiasaina amin'ny fanafanana sy rano mafana ao an-trano mampiasa mpiorina ao an-trano hatramin'ny 500 m2.
Tombontsoa amin'ny fampiasana angovo biomassa
Anisan'ireo tombony hitantsika amin'ny fampiasana biomassa toy ny angovo ananantsika:
Angovo azo havaozina izy io. Miresaka ny fampiasana fako ateraky ny natiora hiteraka angovo isika. Izany no antony ananantsika loharanon-kery tsy mety ritra, satria ny natiora dia mamokatra ireo karazana fako ireo hatrany.
Mampihena ny etona entona entona. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny gazy vokarintsika mandritra ny fandoroana azy ireo dia nalain'ny voly nandritra ny fitomboany sy ny famokarany. Mampiady hevitra izany ankehitriny, satria tsy mandanjalanja ny fandanjana ny CO2 navoaka sy nalentika.
Toeram-pitsaboana biomassa. Loharano: http://www.fundacionsustrai.org/incineracion-biomasa
Ny vidin'ny tsena dia ambany. Io fampiasana angovo voarakitra anaty biomassa io dia tena ekonomika raha ampitahaina amin'ny solika fôsily. Matetika dia ambany ny vidin'ny ampahatelony.
Biomass dia loharano be dia be eran'izao tontolo izao. Saika amin'ny toerana rehetra eto ambonin'ny planeta dia nateraka avy amin'ny natiora ny fako ary azo ampiasaina amin'ny fampiasana azy. Ankoatr'izay, amin'ny ankapobeny, ireo fotodrafitrasa lehibe dia tsy ilaina mba hitondrana ny fako hatrany amin'ny fandoroana azy.
Tombony amin'ny fampiasana angovo biomassa
Vitsy ny fatiantoka amin'ny fampiasana an'io angovo io, saingy tsy maintsy raisina izany:
Amin'ny faritra sasany, noho ny fepetra sarotra fitrandrahana biomassa, mety ho lafo. Matetika koa izany dia mitranga amin'ny tetikasa fampiasana izay misy ny fanangonana, fanodinana ary fitahirizana karazana biomass.
Ilaina ny faritra midadasika ho an'ireo dingana ampiasaina hahazoana angovo biomassa, indrindra amin'ny fitehirizana, satria ny residues dia mazàna manana ambany density.
Indraindray ny fampiasana an'io angovo io mety hiteraka fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana na fanaparitahana noho ny hetsika fanangonana biomassa sy ny fanovana ny habaka voajanahary hahazoana loharano.
Amin'ireto hevitra ireto dia azonao atao ny manana fahitana misimisy kokoa momba an'io karazana angovo azo havaozina io. Na izany aza, amin'ny fotoana iray hafa dia holazaiko aminao bebe kokoa ny karazana boiler biomassa, ny fiasan'izy ireo, ny karazany ary ny tombony azo, ary ny momba ilay resabe voalaza etsy ambony momba ny famoahana ny rivotra iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny angovo biolojika na angovo biomassa
Inona avy ireo tanjona maitso azontsika apetraka amin'ny 2017?
Loka Eoropeana momba ny tontolo iainana ho an'ny orinasa manolo-tena